Saturday February 27, 2021 - 01:00:06 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Dekeda Berbera, waa laf-dhabarta dhaaaale ee Somaliland, waa goob Xasaasiya, waxay kamid tahay goobaha ugu muhiimsan ee lagu qiimeeyo jiritaanka iyo qaranimada Somaliland, waa goob ay haboonayd in xili hore la horumariyo, maadaama oo Dekedaha iyo Madaaraddu yihiin furayaasha laga galo dal, isla markaana lagu qiimeeyo xadaarada iyo tisqaadkiisa Horumarineed inta uu le'eg yahay.
Dekeda Berbera waxay sannooyinkii u dambeeyey ku hawlanay isbedel lagu horumarinaayo, kuwaasoo isagu jira Balaadhinta iyo casriyeynta Dekedda iyo weliba Dhismaha Dekeda cusub oo Casriya, isla markaana ka duwan tii hore, maadaama oo isbedel iyo hana-qaad ay dunidu ka samaysay Gaadiidka iyo weelka wax lagu raro ee mara Badda, waxa Dekeda cusub ee Berbera laga dhigay mid Terminal ah, maadaama Maraakiibta waaweyni hada lagu soo raro Badeecadaha ay sidan Koontiinaro.
Dekeda Berbera waxa lagu sameeyey Qalabayn iyo weliba Casriyay. Sidoo kalena waxa xirfadooda shaqo si weyn kor loogu qaaday Shaqaalaha kala duwan ee Dekeda Berbera, kuwasoo la siiyey aqoon-korodhsi iyo waxbaraasho tayadeedu sarayso.
Dedaalada iyo horumarka baaxada leh ee ay ku Talaabsatay Dekeda Berbera waxa ku suntan Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi, waxana uga sii masuul ah fulinta hawlahaas, Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi oo noqday masuul ay Mahadisay Dekedaha Somaliland oo dhami.